ल फेरि बधाई छ है !(बरु फोटो अलि ठूलो राख्‍नु पर्ने....त्यो टिशर्टको लोगो र र त्यहा लेखेको कुरा पढनै सकिएन)
यस्तो पुरस्कार आउने थाहा भएको भए त म आफैं लेख्थेँ नि एउटा लेख :) हे हे हे !
बरु यसपाला २ लाखौं भीजिटर भने म भएको थीएँ, त्यस बापत पनि केही पुरस्कारको व्यबस्था छ कि?
मेरो पनि बधाइ छ है गोकुल जी।
साच्चै ठरकी जीले भने जस्तै त्यो टिसर्टमा लेखिएको कुरा अली ठूलो बनाएर राख्न मिल्दैन?
ल पुन:एक पटक बधाई छ, खुलामञ्च जी लाई।
अनि नेपालियन जी , मैले पनि अस्तिन दौँतरीमा गाँउ खाने कथाको उत्तर मिलाएको थिएँ,मलाई पनि बरु गाउँको सट्टा टिसर्ट नै पाउँ है।:)
म प्रस्ट आउने गरी फोटो ब्लग राखिदिउँला नी।
सुजन जी गाउ खाने कथा पूरस्कार स्पेशल बेला बेला मा आउंछ। केही पहिले प्रज्वल जी ले गाउं खाने कथामा मा पुरस्कार पाउनु भएको थियो।
गाउं खाने कथाको सट्टा टिसर्ट पाउने कथा दौंतरीको २ बर्ष पूग्नेबेलामा आउदै छ, गाउं खाने कथा घोक्दैबस्नु होला है ;)
ए, लौ त बधाइ छ टि-सर्ट पाउनु भएकोमा र यसको संस्मरण लेखको लागि, खुलामञ्चजी !
हाम्रा नेपालियनजीले आफ्नो गोजीबाट पुरस्कार स्पोन्सर गर्नुभएछ । ल महाकवि देवकोटाको चाल होला है !! ल जोक गरेको ।
खुल्लामञ्चजीलाई बधाई, फोटो अलि ठुलो राख्नुभाको भए हुन्थ्यो, अक्षरै चिनिएन ।
अनि अन्त्यमा तपाईको २ शब्दको लागि ताली ।
सान्चै नै यो ब्लग पोष्टको सुरुवातसंगै टाढा टाढाका साथीहरु देश बिदेशमा बस्ने मित्र तथा दाजु भाईहरु संग घेरै नजिकिएको छ। एक अर्काको मनका कुराहरु आफ्नो मनमा लुकाएर राखेका प्रतिँभाहरु ब्लग मार्फत सारा संन्सारमा फैलाउन सफल भैरहेको छ। त्यसमा पनि यसरी कुनै चिनो या उपहारको ब्यबस्थाले त झन सुनमा सुगंन्दकै काम गरेको छ। उपहार सानो या ठुलोको कुरा हैन समानले पाएको चिज धेरै महत्व हुन्छ भने मलाई लाग्छ।
अनी मेरो पनि बधाई छ, खुलामञ्च जी लाई यसरी नै निरंन्तर लेख्दै गर्नु हुन्छ भने आशा लिएको छु।
साथमा दौतरी परिवारलाई पनि धन्बाद दिनै पर्छ र यसको निरंन्तरता को कामना पनि गर्दछु। जय् ब्लगर
खुलामन्च जी टिसर्टमा लेखेको कुरा चाही फेरी खिचेर राख्नुपर्ला जस्तो छ है।